अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका फ्यानहरुलाई आयो खुशीको खबर, सोच्दै न सोचेको खबर बाहिरिएपछी शिल्पा पनि परिन मख्ख !
काठमाडौँ । भारतीय व्यापारी तथा बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका श्रीमान राज कुन्द्रा जमानतमा छुटेका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यम एएनआइका अनुसार राजले पक्राउ परेको दुई महिनापछि बल्ल जमानत पाएका छन। अ’श्ली’ल भि’डि’ओ ब’ना’एर विभिन्न एपबाट सार्वजनिक गरेको आरोपमा अभिनेत्री शिल्पा सेट्टीका श्रीमान राज कुन्द्रा हिरासतमा थिए ।
अश्लील भिडिओ सुटिङ तथा प्रसारण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका राजलाई ५० हजार भारू धरौटीमा जमानत दिइएको एएनआइले जानकारी दिएको छ। गत बिहीबार मुम्बई प्रहरीले राजविरूद्ध करिब १४ सय पृष्ठको अभियोग पत्र अदालत समक्ष पेश गरेको थियो। राजले शनिबार अनुसन्धान सकिएको र अभियोग पत्र बुझाइसकेको भन्दै जमानतका लागि अपील गरेका थिए। एएनआइका अनुसार उनको जमानत अपीलमा उनले आफूमाथि ष’ड्य’न्त्र भएको र आफूले यस्तो कुनै पनि कार्य नगरेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
राज गत जुलाइ १९ मा पक्राउ परेका थिए। उनले सुरूदेखि नै आफूमाथि झू’टो आ’रोप लागेको बताउँदै आएका थिए। यसअघि पनि उनले धेरैपटक जमानतका लागि अपील गरे पनि अदालतले अस्वीकार गर्दै आएको थियो। तर प्रहरीको अभियोग पत्रमा राजलाई अ’श्ली’ल फि’ल्म ब’ना’उने ‘मुख्य यो’ज’नाकार’ भनिएको छ। उनले फिल्म दुनियाँमा संघर्ष गरिरहेका युवतीहरूलाई प्रलोभन दिएर अ’श्ली’ल भि’डि’ओमा खेलाएको आरोप छ। उनले बनाएका भिडिओहरू विभिन्न एपहरू र वेबसाइटहरूमार्फत् प्रसारण गरिएको आरोप पनि उनीमाथि छ।
प्रहरीको अभियोग पत्रमा ४३ जना साक्षी समावेश छन् जसमा उनका कर्मचारी, साथीभाइसँगै उनकी श्रीमती शिल्पा शेट्टीको पनि नाम भएको एएनआइले लेखेको छ। शिल्पा र राजको सन् २००९ मा बिहे भएको थियो। उनीहरूका एक छोरा र एक छोरी छन्। राजको अनुसन्धान क्रममा प्रहरीले शिल्पासँग पनि सोधपुछ गरेको थियो। तर यो काममा हालसम्म शिल्पाको कुनै संलग्नता नदेखिएको कारण प्रहरीले उनलाई छोडेको थियो ।
Previous के तपाई पत्याउनु हुन्छ ? टिकटक बाट दिनमै लाखौ कामाउने अंशु बर्माको वास्तविकता के हो ? घर, घडेरी देखि कार सम्म (भिडियो हेर्नुस्)
Next पुलबाट हा’म फा’लेर पुरुष बे,पत्ता, मोटरसाइकल, चाबी र बिलबुक फेला